Njodzi Dzengarava | Mutemo Makambani Dubai
Ngarava dzinofamba nengarava dzakafanana nemaguta madiki ari kuyangarara pamusoro pemvura nevashandi vayo uye nevapfuuri sevagari vari munzvimbo dzakawanda- nzvimbo dzepasi dzimba idzo dzimba dzemitambo, nzvimbo dzekutandarira, uye maresitorendi. Asi, kufanana nerimwe guta ripi neripi, ngarava inofamba nayo inokwanisawo kuona njodzi dzakafanana dzekukuvara, dzese dziri nyore uye dzakakomba.
Cruise Saiti Zviitiko Kukuvadza
ndoita sei nenyaya yacho
Ehe, tsaona dzechikepe dzechikepe dzakanyanya uye kana ukatambura neyako, unofanirwa kuziva maitiro ekuita nenyaya yacho nenzira kwayo.
Zvokudya zvine chepfu
Dombo rinokwira madziro
Nhengo dzevashandi dzisingateereri allergic reaction kunyevera nezvikumbiro
Kushamba kwedziva tsaona
Elevator uye escalator tsaona
Zvinhu zvisina kuchengetedzwa
Chirwere cheLegionnaire icho chiri mhando yemamiriro ekurapa akaunzwa nemabhakitiriya akapararira kuburikidza nemabhagi anopisa uye madziva ekushambira
Mhando dze Cruise Ship Injury Zvichemo
Kune akasiyana marudzi echikepe chekukuvara chekukuvara chinoti chinogona kusanganisira zvinotevera:
Kuwira pamusoro pebhawa
Kufamba uye kudonha kana kudonha uye kudonha
Mvura kana tsaona tsaona
Kukuvara kubva pamoto pane ngarava yekufambisa
Akachengetedzwa akakuvara panguva yemahombekombe eoffice
Norwalk hutachiona kana chirwere cheovovirus kana mamwe marudzi ezvirwere zvinokonzerwa nemamiriro asina kuchena kana chikafu chakasvibiswa
Kuchengetedzwa kwekukuvara panguva yemitambo yekuzvivaraidza
Kukuvara nekuda kwekukanganisa kwekufamba
Kudonha chinhu tsaona
Kushungurudzwa kwepanyama kana kwepabonde nekuda kwenzvimbo dzisina kuchengetedzeka kana dzisina kuchengetedzwa
Kuregeredza kwekurapa kana kurapwa
Cruise Chikepe Moto Kukuvadza
Mafuta ari mungarava dzinofamba nengarava dzinogona kukonzeresa kukuvara uye kushungurudzika zvakanyanya. Magetsi enjini anogona kuita kuti ngarava ifambiswe kana kuti rondedzero inogona kutungamira muchikepe kutora mvura kana kunyange kunyura. Kukonzeresa injini kunogona zvakare kukonzera kune vafambi vakasara vakamanikidzwa mukati megungwa pane chimwe chikepe chekudzora. Chikepe chinogona zvakare kurasikirwa nemhepo kumhepo yekuisa uye masisitimu emvura. Hutachiona hunogona kukanganisa chikafu kana masisitimu ezvekuchengetedza chikafu akakanganisika.
Moto uri mukamuri reinjini unogona kuisa njodzi dzakakomba kune avo vanokwira vafambi uye vafambi. Kana ngarava yechikepe yakadonha simba, izvi zvinogona kutungamira:
Magetsi enjini zvinonetsa kunetsekana uye zvinogona kukonzera nyaya nemagetsi makuru ediziro anoshanda ngarava. Izvo zvakakomba sezvo injini dzinoshandura mapuraneti dzichipawo magetsi kune ayo magetsi emagetsi ari pane anosanganisira magetsi ekumhanyisa vachuum zvimbuzi.
Kudzoreredzwa Kukuvadzwa mune Cruise Yechikepe Yetsaona Koti
Vafambisi vengarava vanofamba nechikepe uye varidzi vanokwereta vatyairi basa rekutarisira. Mutsetse wechikepe une chekuita nekuona kuti hapana njodzi dzisina musoro dziripo pane chombo chinogona kuita kuti vafambi vatambure nekukuvara. Kukundikana kuita izvi mabasa uye kuratidza kuti ivo vanoshanda kana mutsetse wechikepe waive usina hanya kunogona kukusiya iwe faira yekukuvara zvakare mukukanganisa kwechikepe chengozi. Compensations iwe unogona kuwana zvinosanganisira:
Parizvino uye mune remangwana mutengo wekugadzirisa
Parizvino uye mune ramangwana mari yekurapa
Inhibhibhu inowana mukana
Kurasikirwa kwemubhadharo nemubhadharo wenguva yemberi unosanganiswa
Kutambudzika uye kurwadziwa
Zvikumbiro zverufu rwakaipa
Sei Chaicho Chakakosha Chikoro Chemotokari Kuteedzera Kuteedzera Gweta Zvingave Zvinoshanda?
Uchibatsirwa nevamiriri vengarava yechikepe mutsaona yeanoti, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti uchagamuchira kana kuripwa kwakarongeka kune chero rudzi rwekukuvara kwawakatsigira uchiri pachikepe. Vanogona kukutungamira mukufamba kwemvura isinga tsanangurike yekuisa faira vachipokana nevanozvifambisa nengarava varidzi vechikepe nevanozvishandira.
Kuisa mhosva kumatare kune varidzi vengarava vafambisi vechikepe nevanozvishandira.